Rano Noopept vovoka (157115-85-0) - Manufacturers Phcoker Chemical
SKU: 157115-85-0 Sokajy: Drug Smart
Rova Noopept vovoka (157115-85-0) video
Rova Noopept vovoka (157115-85-0) Description
Rano Noopept roahina (157115-85-0) Specifications
Product Name Rano Noopept roap
Solubility Rano Noopept roapolo dia voalohany indrindra tsy misy rano amin'ny rano, fa tsy hivoatra mora foana ao anaty rano na ranom-boankazo.
Noopept (GVS-111) no anarana nomena ny N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, ny molekiolan'ny synthetic nootropic.
Noopept dia manana rafitra henjana. Ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina ny medikaly dia ny iray amin'ireo metabolites (cycloprolylglycine) mivaingana (cycloprolylglycine) no mitovitovy amin'ny endriky ny dipeptide endogenous cyclone miaraka amin'ny asan'ny anti-amnesika. Voalaza fa ny fanafody dia mampitombo ny fanehoana ny NGF sy ny BDNF amin'ny hippocampus, mampiseho ny toetra tsaran'ny choline amin'ny fitondran-tena sy ny neuronal, mampihena ny tsindrona oksidita ary mampitombo ny asan'ny antioxidant sy ny famoretana ny kinasary pSAPK / JNK sy ny pERK1. Noopept manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny fampitomboana ny simika ao amin'ny atidoha antsoina hoe BDNF sy amin'ny fomba hafa.
Ny voka-dratsin'ny vovobony Noopept dia mora ary ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mahatsapa na inona na inona. Misy voka-bary vitsy monja, saingy raha raisinao amin'ny tsy fahampian-tsakafo izany dia mety hitera-doza, reraka, lolom-po ary tsy misy aretina.